५३ करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताको डेटा लिक, डेटा लिक भयो भने के हुन्छ ? तपाईंको त परेन ? हेर्नुस् - DonNepal
पछिल्लो २४ घण्टामा २६० कोरोना संक्रमित थपिए, ११३ जना डिस्चार्ज
मृ-त्यु भएको २० बर्ष पछि वीरेन्द्र र ऐश्वर्यको यस्तो भिडियो नारायणहिटी दरबारभित्र भेटियो
माधव नेपाल पक्षले ओली विरुद्ध गर्यो यस्तो निर्णय, चैत ४ गते हुँदैछ वारपार
आज काठमाडौंका दर्जन बढी ठाउँमा विजुली जाने
माधव नेपाललाइ ओलीको यस्तो ‘सरप्राइज’, नेपाल पक्षका सबै नेताहरुको पद खोसिदिए
हरपल निष्पक्ष खबर
२९ फाल्गुन २०७७, शनिबार १२:२९ DON	0
२८ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १७:१९ DON	0
भर्खरै काठमाडौंमा निकालियो मशाल जुलुस
२२ माघ २०७७, बिहीबार ००:०१ DON	0
प्रचण्डलाई यसरी गुन लगाएका थिए लेखराज भटटाले, तर अहिले लेखराज भट्टलाई प्रचण्डले द’लाल भनेपछि प्रचण्डलाई बोकेको फोटो बन्यो भाइरल
१७ माघ २०७७, शनिबार २१:४१ DON	0
प्रचण्ड र नारायणकाजीबीच किन बिग्रियो सम्बन्ध ? मंच मै भनाभन
१२ माघ २०७७, सोमबार ०८:२२ DON	0
५३ करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताको डेटा लिक, डेटा लिक भयो भने के हुन्छ ? तपाईंको त परेन ? हेर्नुस्
१५ माघ २०७७, बिहीबार ०८:१९ DON	0 Comments	Facebook data hacked
काठमाडौं । ५३ करोड ३० लाख फेसबुक प्रयोगकर्ताको डेटा लिक भएको छ । फेसबुक र टेलिग्राम एप एउटै फोनमा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको लिक भएको व्यक्तिगत विवरण अनलाइनमार्फत बिक्रीमा राखिएको छ ।
फेसबुक प्रयोगकर्ताको यो डेटा लिक टेलिग्राम एपको बटमार्फत भएको बताइएको छ । भाइसको रिपोर्ट अनुसार लिक भएका फेसबुक अकाउन्टमा रहेको मोबाइल नम्बरको बिक्री २० अमेरिकी डलरमा भइरहेको छ ।
त्यस्तै थोकमा १० हजार व्यक्तिको जानकारीका लागि पाँच हजार अमेरिकी डलर मोल राखिएको छ । अन्य डेटा समेत यसैगरी बिक्री भइरहेको छ ।
रिपोर्टमा दाबी गरिएअनुसार यो डेटा सुरक्षित म्यासेजिङ एपको रुपमा प्रचार गरिएको टेलिग्राम एपबाट लिक भएको हो । डेटा लिक भएको समाचार बाहिर आएपछि फेसबुकले त्यस्तो बटले सन् २०१९ पछि बनेका अकाउन्टमा भने काम नगर्ने बताएको छ ।
सोझो अर्थमा भन्ने हो भने यो लिकबाट त्यस्ता प्रयोगकर्ताहरु प्रभावित भएका छन् जसको अकाउन्ट सन् २०१९ अघि बनाइएको थियो । फेसबुकका अनुसार यो ह्याकिङबाट सन् २०१९ भन्दा अगाडि बनाइएका अकाउन्टमा टेलिग्रामबाट पहुँच बनाउन सकिने अवस्था रहेको छ ।
यदि कुनै व्यक्तिले कसैको फेसबुक आईडी थाहा पाएको छ भने यो बटमार्फत त्यस्तो प्रयोगकर्ताको मोबाइल नम्बर पत्ता लगाउन सक्ने जोखिम रहेको थियो । त्यसैगरी यदि कुनै व्यक्तिको फोन नम्बर छ भने उक्त व्यक्तिको फेसबुक आईडी पत्ता लगाउन समेत यो बट प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको थियो ।
यद्यपी फेसबुकको उक्त भल्नरेबिलिटी (जोखिम) सन् २०१९ मै टाली सकिएको बताइएको छ । डेटा लिकमा परेका फेसबुक प्रयोगकर्ताहरु फिशिङ आक्रमण तथा अन्य किसिमका ठगीमा पर्नसक्ने जोखिम छ । फेसबुकले लामो समयदेखि टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन प्रयोग गर्ने आफ्ना प्रयोगकर्ताबाट फोन नम्बरहरु संकलन गर्दै आएको छ ।
के हो बट ?
बट एक प्रकारको सफ्टवेयर हो । जसले पूर्व निर्धारित कामलाई बारम्बार दोहोर्‍याइरहने सामर्थ्य राख्दछ । इन्टरनेटको माध्यमबाट काम गर्ने यस्तो बटको प्रयोग सामाजिक सञ्जालमा धेरै मात्रामा हुने गर्दछ । जसबाट कुनै कुरालाई भाइरल बनाउने, लाइक धेरै देखाउने, रिट्वीट गर्ने आदि कामहरु गर्ने गरिन्छ ।
← आजदेखि स्वस्थानी व्रत सुरू, यस वर्ष शालीनदी मेलामा नयाँ नियम
हत्केलामा ‘X’ चिन्ह छ भने यस्तो हुनेछ तपाईको भविष्य ! →
कम्प्युटर कीबोर्डका यी १२ वटा फङ्सन `की´ ले के के काम गर्छ ? जानी राखौं
१७ माघ २०७७, शनिबार ००:५१ DON	0
१६ माघ २०७७, शुक्रबार २१:४७ DON	0
यु-ट्युवले कोरोनाका बारेमा भ्रम छर्ने भिडियोहरु सबै हटाउने
४ पुष २०७७, शनिबार १५:३१ DON	0
‘सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम’ बाट सधैका लागि अस्ताए रवी लामिछाने, सबैका लागि छोडे अन्तिममा यस्तो भाबुक संदेश
नेपाल सरकारले परीक्षणका रुपमा प्रयोगमा ल्याएको नागरिक एपका लागि आफ्नै नाममा सिमकार्ड दर्ता गर्न टेलिकमको आग्रह, यस्तो छ नामसारी गर्ने तरिका
उपचारका लागि बुटवलबाट काठमाडौं ल्याउँदै गर्दा भारत्तोलनका बिश्व बिजेता रुप कार्कीको निधन
Dharan – 5, Deurali, Sunsari Nepal
Branch: Abudhabi, UAE
Chairman: Hari Prasad Yakkha
Editor: Ashis Limbu
Administrative chief : HPT
DOIB Reg. num:- Under Process…
DONnepal नेपाली अनलाइन खबर पोर्टल हो। हामी यो अनलाइन न्युज पोर्टल www.donnepal.com पूर्वको धरान शहर तथा युएईको अबुधाबीबाट संचालन गर्दै आइरहेका छौ। देश तथा परदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली More…
‏‎Dharan Online News‎‏
Copyright © 2021 DonNepal. All rights reserved.